बुबाले उपचार खर्च तिर्न नसक्दा १७ दिने शिशु अस्पतालमा ब,न्धक ! – Dainik Sangalo
बुबाले उपचार खर्च तिर्न नसक्दा १७ दिने शिशु अस्पतालमा ब,न्धक !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र ०८, २०७८ समय: १८:३७:३५
आमा–बुबाले उपचार खर्च तिर्न नसक्दा १७ दिने शिशु अस्पतालमा ब,न्धक !
आमा–बुबाले उपचार खर्च तिर्न नसक्दा १७ दिने शिशु अस्पतालमा ब,न्धक हुनु परेको छ । विराटनगरको आरके चिल्ड्रेन अस्पतालले उपचार खर्च नबुझाएको भन्दै १७ दिने शिशुलाई ब,न्धक बनाएको हो ।
दमकस्थित लाइफलाइन अस्पलालमा जन्मिएका शिशुलाई उक्त अस्पतालले विराटनगर रिफर गरेको थियो । जन्मिएको केही समयमा नै लाइफलाइनले अर्कै सुबिधासम्पन्न अस्पताल लग्नु भनेपछि शिशुका आफन्तले आरके चिल्ड्रेन अस्पतालमा ल्याएका थिए । शिशुलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरेपश्चात जेनेरल वार्डमा सारेर डिस्चार्ज दिइएपनि आफन्तले शिशुलाई घर लैजान पाएका छैनन् ।
१७ दिनअगाडि ल्याएको शिशुलाई गत शुक्रबार नै डाक्टर सुवोध शर्माले डिस्चार्ज दिएका थिए । तर अस्पतालमा उठेको ६५ हजार रुपैयाँ बुझाउन नसक्दा छोरालाई घर लैजान नपाएको बच्चाकी आमा विमला कर्मकारको दुखेसो छ । उनीहरूको घर झापाको हल्दिबारी–३ हो ।
हाल उपचार खर्च जुटाउन विमलाका बुबा भोला कर्मकार भौतारिरहेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण अस्पतालको खर्च बुझाउन समस्या परेको सुनाउँदै भोलाले केटिएम दैनिकसँग भने, ‘सबैतिर कोसिस गरिरहेका छौँ । कतै पार लागेको छैन । अब त चिया खानेसमेत पैसा छैन । अस्पतालमा झन्–झन् बिल उठिरहेको छ । गरिबले कसरी त्यत्रो पैसा तिर्नु ?’
अहिलेसम्म उनीहरूले अस्पताललाई एक लाख ९५ हजार बुझाइसकेका छन् । अब, औषधि र बेडको गरेर ६५ हजारभन्दा बढी बुझाउनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । कोरोना महामारीका कारण लामो समय दैनिक काममा समस्या परेका कारण अस्पतालमा खर्च बुझाउन समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘धनीपुर्जा धितो राखेर एक लाख ५० हजार झिकेका थियौँ । अस्पतालमा बुझाउँदा र खाना खर्चलगायतमा सकियो । अब कसरी जोहो गर्नु गरिब मान्छेले ?’
यता, अस्पतालले भने पहिलादेखिनै भन्दासमेत आफन्तले पैसा डिपोजिट नगरेको बताउँदै पैसा नबुझाएमा बच्चालाई घर पठाउन नसक्ने जनाएको छ । अस्पतालका प्रशासन प्रमुख सौजन्य गुरागाइँले आफूहरूले बारम्बार पैसा डिपोजिट गर्नुभन्दासमेत नमानेको बताए ।
उनले चार दिनअगाडि डिस्चार्ज नभएको बताउँदै सोमबार डिस्चार्ज गर्नुपर्नेमा पैसा नतिरेका कारण सम्भव नभएको बताए । पैसा लिएर आएको खण्डमा केही छुट गरिदिनेसमेत उनको भनाइ छ ।
यस्तै, मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले भने आफूरूसँग उक्त विषय आइनसकेको जनाए । उनले उपाचार खर्च तिर्न नसकेका कारण नै शिशुलाई ब, न्धक बनाउन नपाइने बताउँदै त्यस्तो भएमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत बताए ।
Last Updated on: August 24th, 2021 at 6:37 pm